Iindaba-Iimveliso ezintsha zelaphu le-Teflon fiberglass
Ingubo ye-Teflon fiberglass Igama le-teflon eligqunywe ngeglasi yefayibha yelinen, ekwabizwa ngokuba yintsimbi (yentsimbi) ekhethekileyo yeqondo lobushushu eliphezulu ipeyinti enganyangekiyo (iwelding) yengubo, imisiwe i-polytetrafluoroethylene (eyaziwa ngokuba yi-King King) emulsion njengezinto ezingafunekiyo, ezifakwe ngendwangu yeglasi yefayibha ephezulu. Ukusebenza okuphezulu, izinto ezininzi zokudibanisa izinto ezitsha iimveliso.Ngenxa yokusebenza kwayo okugqwesileyo, isetyenziswa ngokubanzi kwezobuchwephesha, iphepha, ukutya, ukhuselo lokusingqongileyo, ushicilelo kunye nokudaya, impahla, ishishini lamachiza, iglasi, amayeza, i-elektroniki, ubushushu, ulwakhiwo (zophahla inwebu isakhiwo ngelaphu), besila isilayi ivili, oomatshini kunye nezinyeamasimi.
Iimpawu eziphambili zomsebenzi welaphu leTeflon:
1. isetyenziswe kubushushu obuphantsi phakathi kwe -196 kunye neqondo eliphezulu phakathi kwe-350 ℃. Ukumelana nemozulu kunye nokumelana nokuguga. Emva kwesicelo esisebenzayo, ukuba sibekwa ngokuqhubekayo kangangeentsuku ezingama-200 kuma-250 ℃ ngokufudumala okuphezulu, ayisiyi kuncipha kuphela amandla, kodwa ubunzima abuyi kuncitshiswa. Xa ubekwe kuma-350 ukuya kuma-120 eeyure, ubunzima buhle kuphela nge-0.6% okanye kunjalo; Kwimeko ye -180 ℃ ubushushu obusezantsi kakhulu abuzukuqhekeka, kwaye kugcinwe ukuthamba kwasekuqaleni.
2.Ukungabinamatheli: akukho lula ukubambelela kuyo nayiphi na into. Kulula ukucoca zonke iintlobo zamabala eoyile, amabala okanye ezinye izinto eziqhotyoshelweyo kumphezulu wayo; I-Slurry, resin, coating, phantse zonke izinto ezinamathelayo zinokususwa ngokulula;
3. ukumelana nokubola kwemichiza, kunokumelana ne-asidi eyomeleleyo, i-alkali eyomeleleyo, i-aqua aqua kunye ne-organic solvents corrosion.
4. Ukungavisisani okuphantsi (0.05-0.1) lolona khetho lufanelekileyo lokuthambisa ioyile ngaphandle kweoyile.
Ukuhanjiswa kokukhanya ukuya kuthi ga kwi-6 ~ 13%.
6.nokusebenza kokugquma okuphezulu (i-dielectric rhoqo engagungqiyo: 2.6, tangent phantsi kwe-0.0025), anti-ULTRAVIOLET, anti-static.
7.Ukuzinza okuhle ngokwamacala (ukungqinelana kokulinganisa kungaphantsi kwe-5 ‰), amandla aphezulu.
8. ukumelana namachiza kunye nokungabinetyhefu. Akumeli phantse kuzo zonke iimveliso zoxubo mayeza.
9. ukudodobalisa umlilo.
1.Umbethe we-anti-stick, i-gasket, ilaphu kunye nebhanti yokuhambisa; Ngokobungqingqwa obuhlukeneyo, obusetyenziselwa ukomisa ibhanti yokuhambisa oomatshini, ibhanti yokuncamathelisa, ibhanti yokutywina, njl.
2. Ukuwelda kweemveliso zeplastiki, ilaphu le-welding lokutywina nokutywina, iphepha leplastiki, ifilimu, itywina lokucinezela iphepha.
3. Ukufakelwa kombane okuphezulu: ukufakwa kombane ngesiseko, ispacer, i-gasket kunye ne-liner.
Umaleko wobushushu onganyangekiyo ngobushushu;
5. I-microwave gasket, iphepha le-oveni kunye nokoma ukutya;
6. Ibhanti elinamathelayo, ukugqithisa ukuprintwa kwelaphu lasetafileni elishushu, ikhaphethi ngasemva yokuphilisa ibhanti yokuhambisa, irabha yokuhambisa ibhanti yokuhambisa, iphepha elirhabaxa eliphilisa ilaphu lokukhulula, njl.
7. Ingcinezelo-ethe-ethe yokuncamathelisa isiseko selaphu.
8. Izinto zokwakha inwebu yokwakha: uphahla lweendawo zemidlalo ezahlukeneyo, iipavumente zesitishi, iiparasoli, iipavumente zomhlaba, njl.
9. Isetyenziselwa ukutyabeka i-anticorrosion imibhobho eyahlukeneyo ye-petrochemical, ukhuselo lokusingqongileyo kukonakaliswa kwerhasi yenkunkuma yamandla, njl.
10. Isinxephezeli esiguqukayo, izinto zochuku, ukugaya isilayidi samavili.
11. Ilaphu le-anti-static linokwenziwa emva kokuqhutywa okukhethekileyo.
Ingubo yeAlglised fiberglass, Acrylic Camera Fibreglass, Ingubo ye-Acrylic Fiberglass, Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu, Indwangu yeFiliclass Camera, Ingubo yeFiberglass,